Dowlad Qatar oo qoraneysa Ciidamo Soomaali ah. – Xeernews24
Dowlad Qatar oo qoraneysa Ciidamo Soomaali ah.
14. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wargeyska Almasar Al-yoom ee ka soo baxa magaalladda Qaahira iyo kuwo kale oo Carbeed ayaa qoray inay Dowladda Qatar qaadanayso Askar Soomaali ah si ay u kordhiyaan Tirada Ciiddankeeda.
Dowladda Qatar waxay qaadanaysaa dhallinyarada shaqo la’aanta ku hayso dalalka saboolka ee Geeska Afrika, oo ay Soomaalia safka hora kaga jirto, iyadoo Askari kasta mushaar ahaan bishiiba loo siinayo 6,000 oo Doollaarka Maraykanka, waa sida lagu xusay Warbixintaasi.
Wargeyska Almasar Al-yoom ayaa ka soo xigtay Garowe Online inay Saraakiil sare oo ku sugan Villa Soomaalia ay Qoristaasi ka wadaan dhowr Maamul-gobaleedyo, waa sida lagu xusay Warbixinta.
Weriye ku sugan magaaladda Garowe ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inuu booqday Xafiiska Baasaboorada, halkaasi oo uu ku wareystay dhallinyaro saf ugu jirtay sidii ay u heli lahaayeen Baasabooro Soomaali ah si ay ugu diyaar garoobaan Qorshaha Safarka ee loogu qaadayo dalka Qatar.
Mid ka mid ah Dhallinyaradaasi oo codsaday inaan magaciisa la xusin ayaa u sheegay Garowe Online marka ay helaan Baasaboorada inay muddo 20-maalmood sugi doonaan Fiisaha dalka Qatar, halkaasi oo ay ku qaadan doonaan Tababar Milliteri si ay uga mid noqdaan Ciiddanka dalkaasi.
Waxa uu intaasi ku daray inay dhamaan Dhallinyarada aadi doona dalka Qatar mushaar ahaan loo siin doonaan 6,000 oo Dollar bishiiba, kadib, tababarkooda.
Wargeyska Almasar Al-yoom ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof oo u shaqeeya Wasaaradaha Xukuumadda Feedeeraalka loo diray dalka Qatar.
Si kastaba ha ahaate, Madaxda DFS iyo Maamul-gobaleedyada weli kama hadlin sugnaanshaha Qorshaha la sheegay inay Dowladda Qatar ku qoranayso Askar Soomaali ah,mana jiraan Warar Madax-bannaan oo xaqiijinaya Warkaasi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/geell-carbeed.jpg 167 301 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-14 10:24:062017-10-14 10:24:06Dowlad Qatar oo qoraneysa Ciidamo Soomaali ah.
Sawirro: Shimbir ku sigatay inay soo rido diyaarad ay leedahay Shirkadda Turkish... Wasiirka wasaraadda Gaadiidka iyoDuulista Hawada Soomaaliya oo ka Hadlay